Neymar ma PSG baa iibsanaysa mise isagaa is iibinaya?!! (Eeg sheekadan la Yaabka leh!) – Gool FM
Neymar ma PSG baa iibsanaysa mise isagaa is iibinaya?!! (Eeg sheekadan la Yaabka leh!)
Byare July 31, 2017
(Qatar) 31 Luulyo 2017. Neymar ayaa lagu wadaa inuu usbuucan tjibaada caafimaad u maro kooxda Paris Saint-Germain, sida ay wararku sheegayaan.
Laacibka reer Brazil ayaa la sheegay inuu heshiis shaqsi ahaaneed la gaaray camaaliqada Farance ka hor inta uusan ugu biirin heshiis rikoodh ah 196-milyan oo bound.
Neymar ayaa ka haray xiddigihii Barcelona ee ka soo laabanayay magaalada Miami ee dalka Mareykanka kaddib kulamadii la isugu diyaarinayay kal ciyaareedka cusub oo ay halkaa ku soo yeesheen.
Wuxuu safar xayaysiin ah u aaday dalka Shiinaha, wuxuuna intaa kaddib u duuli doonaa dalka Qatar si uu ula kulmo madaxwaynaha PSG Nasser Al-Khelaifi.
Warsidaha Al Watan ee ka soo baxa dalka carbeed ayaa warinaya in 25-jirka uu maalmaha soo socdo u soo duuli doono Qatar si uu tijaabada caafimaad ugu maro Aspetar medical centre.
Maalgalinta ciyaaraha Qatar oo ay milkiyadeedu leedahay PSG ayaa la warinayaa inay Neymar u bandhigeen 270 milyan oo bound waana qorshe uu isaga nafsad ahaantiisa isaga bixin doono lacagaha lagu iibsanayo.
Wakaaladaha Wararke ee Spain waxay sheegayaan in cadadkaas loogu soo bandhigay si abaal marin ah si uu u noqdo safiir 2022 Koobka Adduunka ee Qadar.
Laakiin sheekadu saa ma ahan ayaa la leeyahay oo wuxuu lacagta u isticmaalayaa sidii uu isaga nafsad ahaantiisa isaga bixin lahaa lacagaha lagu bur burinayo qandaraaskiisa isla markaasna u qasbi lahaa sidii uu ugu dhaqaaqi lahaa horyaalka Ligue 1.
Fikirkaan yaabka leh ayaa waxa uu PSG u ogolaan karaa inay iska ilaaliyaan ama ka fogaadaan xeerka dhaqaalo wanaaga ee Uefa’s Financial Fair Play, maadaama ay farsamo ahaan noqoneyso lacag uu jeebkiisa ka shubay Neymar.
Laakiin La Liga ayaa camaaliqada France ku dacwayn doonta xiriirka UEFA maadaama ay aaminsan yihiin inaysan jirin wado ay ku dhalin karaan dakhliga ay ku iibsanayaan Neymar iyagoon jibin xeerka dhaqaalo wanaaga FFP.
Haddaba sheekadu waxay mareysaa: “Cimrigaada dheeraado geel dhalaayana waa ku tusaa.”. Waa la yaab habka ay PSG ku dooneyso inay kula wareegto Neymar.
Harry Kane oo ka hadlay xiisaha uga imaanaya Chelsea
Goorma ayuu Riyad Mahrez tijaabada caafimaad u marayaa AS Roma??